Isiza saseMpumalanga - i-Afrikhepri Fondation
0 / 5 Qaphela: 0
Emfanekisweni ongaphezulu kwesobunxele unengxenye yesiza saseMpumalanga eNingizimu Afrika. Yilapho amanxiwa wedolobha elidala kakhulu elakhiwa ngumuntu wesimanje atholakala kuwo wonke umlando wesintu. Amanxiwa alo muzi asuselwe eminyakeni engaba ngu-100 000 kuya kwengu-200 edlule. Isazi sezinkanyezi uBill Hollenbach ubeka ubudala besiza (amanxiwa aseMpumalanga) eminyakeni eyi-000.
UJ. Heine noMnuz Tellinger balinganisela ukuthi isayithi okungenani iminyaka engu-75 000.
Ngenye yezindonga zesayithi laseMpumalanga (eNingizimu Afrika namhlanje) ukuthi unesithombe, yilokho okwakumdala kunabo bonke i-Ankh Cross esivunyelwe emlandweni (isithombe ngezansi kwesithombe phezulu ngakwesokunxele). Ngempela, siyaqaphela isithombe se-Ankh Cross (uphawu lokuphila okuphakade) enhliziyweni yediski yelanga yokukhanya yelanga (Ra).
Lezi zimpawu (uphawu lwelanga kanye nesiphambano sika-Ankh), sibafumana ngokukhululekile njengoba wonke umuntu eyazi mayelana namafresco kanye nemibhalo yenkathi kaFaro, njengoba kungabonakala emfanekisweni oqondile noma opharadini u-Akhenaton ukwenza iminikelo , uthola izibusiso zaphezulu, izibusiso ezimelelwa yimisebe yokukhanya ephela ngezandla ezinika impilo, amandla kanye nempilo ngobuningi (okufanekiselwa isiphambano sika-Ankh) kuFaro.
Lezi zimpawu (uphawu lwelanga kanye nesiphambano sika-Ankh) emanxiweni esayithi laseMpumalanga kubonisa ukuthi ingokomoya laziwa futhi lenziwa okhokho bethu kusukela ekuqaleni kwesikhathi, ngaphambi kwenkathi yamaFaro. Yilezi zingokomoya ezivela ekujuleni kwezwekazi futhi zenziwa okhokho bethu kusukela ekuqaleni kwesikhathi, ukuthi impucuko ye Pharaonic izuzwe futhi iqhubekele, yingakho sithola lezi zifanekiso ngenkathi yamaFaro.
Lokhu kubonisa ukuthi lokhu okungokomoya okwenziwe esigodini seNayile (impucuko kaFaro) kuyingokomoya labokhokho bethu kusukela ekuqaleni kwesikhathi. Futhi lokhu kubonisa futhi, umsuka oqhelile kakhulu wempucuko kaFaro. Sizocaphuna ekupheleni kokuhlaziywa kwethu, amazwi e-European sociologist ebalulekile, uProfesa Gurvitch, owavuma iqiniso, wathi:
"Isiko laseNigro-Afrika sinikeze izwe isibonelo sokuqina okungavamile namandla. Yonke imiqondo ebalulekile, inkolo nefilosofi, nginguye, ngiyaqiniseka, ngaphandle kwalo mthombo. UKUBHALWA KWE-EGYPT OKUYINGABENZEKA NGEZIKHONO ESIKHULU SOMTHETHO WASE-NEGRO AFRIKA, KUNYE KUNYE NJENGOBA NJENGOKUBA NGOKUBA UKUBHALA. "
UGeorges Gurvitch, umagazini okhethekile we-Presence Africaine umagazini, u-Avril 1959. Echazwe nguKheikh Anta Diop, izisekelo zezomnotho nezamasiko wesifundazwe sase-African black, Presence Africaine, 1974, P 15.
KuProfesa Gurvitch, impucuko yenkathi kaFaro yayiwumphumela wokuthuthukiswa nokulungiswa kwesilinganiso esiphakeme (i-sublimation) yenkambiso ekhona e-Afrika kusukela ekuqaleni kwesikhathi.
ingokomoya esilithola esikhathini sobuFaro, ingokomoya esilizuze njengelifa kokhokho bethu, ngakho-ke kwaba ngumoya owawenziwa e-Afrika kusukela ekuqaleni kwesikhathi.
Ngomlando wase-Afrika-umlando wase-Afrika
Umlando Jikelele we-Afrika (I-Volume 5)